Iindaba - Ngaba kungcono ukusela amanzi kwiglasi ephezulu ye-borosilicate okanye kwiglasi eqhelekileyo?
Glass oli wekhadi
Ukususela ekuzalweni kwayo, iglasi ye-borosilicate teacup iye yathandwa ngokunzulu ngabantu. Sesinye sezinto eziyimfuneko kubomi basekhaya, kunye nokucaca okuphezulu, ukumelana ne-abrasion, umphezulu ogudileyo, ukucoca ngokulula kunye nempilo.
Nangona kunjalo, imibuzo emininzi iphakanyisiwe buthule, "Ngaba iikomityi zeglasi eziphezulu zinokuba yityhefu? Iglasi ye-borosilicate ephezulu yokusela isilicon yamanzi iya kunyibilika" njalo njalo. Ke iglasi ye-borosilicate ephezulu yokusela ekugqibeleni ayilunganga, oku kulandelayo ndiza kukuthatha ukutolika iglasi ye-borosilicate ephezulu.
Iglasi borosilicate High ukusetyenziswa iglasi kwimeko iimpawu lobushushu eliphezulu conductive, ngokusebenzisa ukufudumeza lwangaphakathi ukuqonda ukunyibilika iglasi, ke, luhlobo lwamaxabiso asezantsi, lobushushu eliphezulu ukumelana, amandla aphezulu, iqondo lobushushu eliphezulu, lukhuni phezulu, ukukhanya eliphezulu ukuhanjiswa kunye nokuzinza okuphezulu kweGlasi ngezinto ezikhethekileyo zeglasi, ngenxa yokusebenza kwayo okubalaseleyo, izinto eziphezulu ze-borosilicate yeekomityi zeglasi zinokulunga kwendebe yeglasi eqhelekileyo ayinakho ukubonelela.
Indebe yeglasi eqhelekileyo
Teacups zeglasi eziqhelekileyo kulula ukuba zingalingani ekufudumaleni, okukhokelela kumaqondo obushushu ahlukeneyo kwicandelo ngalinye. Ngenxa yomgaqo wokwandiswa kunye nokucutha kubanda kunye nobushushu, xa kungalingani ekufudumaleni nakumahluko omkhulu kakhulu, iglasi kulula ukuyaphula.Kwangelo xesha, ubushushu beglasi obuqhelekileyo abuphezulu, iqondo lobushushu eliphezulu kakhulu kulula ukwenza iglasi yaphukile
Indebe yeglasi borosilicate High
Iglasi ephezulu ye-borosilicate teacup yenziwa ngokudubula kubushushu obuphezulu, obunokuziqhelanisa nobushushu obuphezulu kunye nobushushu obuphantsi. Amanzi ayi-100 ℃ ashushu awazukuqhekeka, kwaye akukho ukwandiswa kobushushu kunye nokucutha ukubanda okuqhele ukubonwa kwizinto ngokubanzi.Ilinye, iziselo zeasidi kunye nolunye ulwelo nazo zinikezelwa zingenasongo kwaye zingenancasa, ngakumbi i-borosilicate ephezulu yinto yeglasi ekhethekileyo enezinto eziphezulu. uzinzo lweekhemikhali, kwaye akukho nto injengokunyibilika kwesilicon.Ukongeza, iikomityi zeglasi ze-borosilicate kulula ukuzicoca kwaye zihlangabezana nemigangatho yokhuseleko.
Hayi, 802, iCandelo 2, Ukwakha i-11, iSigaba 2, iAobei-Gongyuan, iSithili seChang'an, iShijiazhuang, Hebei, China